Madaxweyne Shariif iyo Jerry Rewlings oo yeeshay kulan ay uga hadleen khilaafka u dhexeeya Baarlamaanka | Calanka Somalia
← Midowga Afrika oo Muqdisho ka bilaabay dhexdhexaadin lagu xalinayo khilaafka baarlamanka Somalia
Madaxweyne Shariif iyo xildhibaanadii xilka qaaday Shariif Xasan oo maanta kulan xasaasi ah ku yeelanaya Muqdisho →
Madaxweyne Shariif iyo Jerry Rewlings oo yeeshay kulan ay uga hadleen khilaafka u dhexeeya Baarlamaanka
Arbaco, Feberaayo 08, 2012 (Moment Media) − Madaxweynaha Soomaaliya, Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo ergayga Midowga Afrika ee Soomaaliya, John J. Rawlings ayaa maanta kulan ay uga wadahadleen khilaafka u dhexeeya xildhibaannada baarlamaanka Soomaaliya ku yeeshay Muqdisho.
Kulankan oo ahaa mid albaabbadu xirnaayeen ayaa socday muddo saacado ah, iyadoo aan si dhab ah loo ogeyn wixii la iskula gartay, balse waxaa markii uu soo dhammaaday kulanka hadal kooban siiyay saxaafadda isagoo sheegay inuu kala hadlay madaxweynaha sidii lagu xallin lahaa khilaafka xildhibaannada baarlamaanka.
“Waxaan halkan u joogaa sidii aan qayb uga qaadan lahaa xallinta khilaafka u dhexeeya xildhibaannada baarlamaanka Soomaaliya, haddii la xallin waayana Midowga Afrika go’aan ayuu ka qaadan doonaa khilaafka,” ayuu Rawlings u yiri si kooban.
Madaxweynaha Soomaaliya lama uusan hadlin saxaafadda, waxaana sidoo kale baaqday kulan uu ergayga Midowga Afrika ee arrimaha Soomaaliya uu maanta la yeelan lahaa xildhibaannada kasoo horjeeda Shariif Xasan Sheekh Aadan.
Ergayga oo shalay soo gaaray Muqdisho ayaa ku sheegay socdaalkiisa inuu yahay mid la xiriira go’aan uu horay u qaatay oo ahaa inuu isku keeno labada garab ee uu baarlamaanka Soomaaliya u qaybsan yahay.
Dhanka kale, ra’iisul wasaaraha Soomaaliya, C/weli Maxamed Cali ayaa sheegay inuu soo dhaweynayo dadaalka uu Rawlings ugu jiro dhammeynta khilaafka u dhexeeya xildhibaannada baarlamaanka Soomaaliya.
“Innagu waan soo dhaweynaynaa in khilaafka la dhameeyo, waxaana ku talinaynaa in xildhibaannadu ay khilaafkooda dhammeeyaan. Dadaalka uu wado eraygana si aad ah ayaan u soo dhaweynaynaa, waxaana rajeynaynaa inuu ku guuleysto,” ayuu yiri ra’iisul wasaaraha Soomaaliya.
Ugu dambeyn, ra’iisul wasaaruhu wuxuu sheegay inaan la aqbali karin inuu sii socdo khilaafka u dhexeeya baarlamaanka, wuxuuna xusay in xukuumad ahaan ay doonayaan inay helaan baarlamaan ay la shaqeeya.
Shirkii Kooxda xiriirka caalamiga ah ee Soomaaliya oo maalin ka hor lagu soo gabagabeeyay magaalada Jabuuti ee dalka Jabuuti ayaa waxaa go’aammadiisii ka mid ahaa in sida ugu dhaqsiyaha badan lagu dhameeyo khilaafka u dhexeeya xildhibaannada baarlamaanka Soomaaliya.